January 12, 2022 – नेपाली सूर्य
स्याङ्जामा घट्यो डरलाग्दो घटना दुई दिदि बहिनि माथि …….
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on स्याङ्जामा घट्यो डरलाग्दो घटना दुई दिदि बहिनि माथि …….
स्याङ्जामा १६ महिने बालकको ह’त्या भ’ए’को खबर आएको छ। वालिङ्ग नगरपालिका–१० भकुण्डेस्थित ठाडोलाइनमा डेरा गरी बस्ने रनमाया गुरुङ्गको १६ महिने छोरा साइमन गुरुङ्गको घाँ’टी रे’टे’र ह’त्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । भकुण्डेमा डेरा गरी बस्ने रनमाया गुरूङका १६ महिने छोरा साइमन गुरूङको मृत्यु भएको हो। उनको उपचारको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङ पठाउँदा उपचारको क्रममा […]
यस्तो काण्डमा पक्राउ परेका बुढाबुढीलाई प्रहरीले छोड्यो
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on यस्तो काण्डमा पक्राउ परेका बुढाबुढीलाई प्रहरीले छोड्यो
काठमाडौँ, पुस २८ गते । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवीलाई रिहा गरिएको छ । पुस ७ मा पक्राउ परेका सुवेदी दम्पतीलाई सरकारी वकिलको सहमति लिएर हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता (एसपी) श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए । सिआइबीले लिखत किर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउन […]
नेपालमा आज एकैदिन ३०७५ जनालाई को’रोना पुष्टि कुन ठाउँमा कति?
January 12, 2022 January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on नेपालमा आज एकैदिन ३०७५ जनालाई को’रोना पुष्टि कुन ठाउँमा कति?
काठमान्डौ- नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ३०७५ जनालाई को’रोना पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रलायका अनुसार देशका विभन्न प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा उक्त संखामा संक्रमित थपिएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट ३०७५ जनामा को’रोना पुष्टि भएको छ । यस अवधिमा १३ हजार ३६ परीक्षण भएको छ । २४ घण्टामा २७८ जना को’रोनामुक्त भएका छन् […]
देवर भाउजुलाई राति एउटै ओछ्यानमा भेटे पछि गाउँले हरुले राम धुलाई (भिडियो सहित)
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on देवर भाउजुलाई राति एउटै ओछ्यानमा भेटे पछि गाउँले हरुले राम धुलाई (भिडियो सहित)
काठमाडौ। झापा जिल्लाको झि’ल्झिले घर भएका चन्द्र थापा मगरले आफ्नै भाउजु लिएर अहिले फरार भएका छ्न। श्रीमती वैदेशिक रोजगारिका लागि कुवेत गएको बेला साना छोराछोरीलाई घरमा बिचल्ली बनाएर चन्द्र थापा अहिले भाउजु लिएर फरार भएका हुन। १ महिना देखी सम्पर्क बिहिन भएको भन्दै आफन्तहरु मिडियामा आएपछि उनिहरुको अहिले खोजी भैरहेको छ। श्रीमतिले विदेशमा दुख गरेर […]
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on मिलमा सल बेरिएर महिलाको मृत्यु
पुस । चौरपाटी गाउँपालिका–४ पायलका एक महिलाको कुटानी पिसानी मिलमा सल बेरिएर मृत्यु भएको छ । साँफेबगर नगरपालिका–१ बैजनाथमा रहेको आफ्नै कुटानी पिसानी मिलमा सल बेरिएर ५१ वर्षीया सुन्तला बोहराको घटनास्थलमै ज्यान गएको मृतकका श्रीमान शंकरमान बोहराले जानकारी दिए । धान कुट्ने क्रममा सल बेरिएको हो । मृतक बोहराको शरीर दुई भाग भएको छ । […]
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए
एक युवा , जस्को ठुलो घर थियो, हाँसी खुसी परिवार थियो, सुख, सुविधा सबै थियो, परिपक्क उमेर भएकाले चारै तिर बाट बिहेको लागि कुरा आउँछ, कुल घरानकी एक असल केटिसँग विबाह पनि हुन्छ, तर उ प्राय उदास रहिरहन्थ्यो, दिल खोलेर हाँस्ने रमाईलो गर्ने गर्दैनथ्यो, किनकि बाहिर बाट जे देखिन्थ्यो त्यो पूरा साँचो थिएन। घर ठूलो […]
अस्पताल पुर्याएर आफन्त फर्केर आएनन्, उनले हुर्काएको परेवा यसरी खोज्दै आयो (भिडियो सहित)
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on अस्पताल पुर्याएर आफन्त फर्केर आएनन्, उनले हुर्काएको परेवा यसरी खोज्दै आयो (भिडियो सहित)
यो केही समय अघिको घटना हो । यि विरामी कहाँका हुन् त्यसको परिचय खुलाईको छैन । एक जना नर्सले यो तस्बीर सार्व`जनिक गर्दै लेखेकी थिइन् तीन दिन देखि अस्पतालमा भर्ना भएका यिनका कोही आफन्त आएका छैनन् । उनलाई अस्प`तालमा चिकित्कस र नर्सले नै सेवा गर्दै आएका छन् । अस्पताल भर्ना गरेर गएका आफन्त फर्केर नआए`पनि […]
प्रचण्डको पाटी फेरी बन बाश हुनथाल्यो, त्यसैले म केपी ओलीतिर लागेँ, केपी ओली राष्ट्रका पिता हुन: रायमाझी
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on प्रचण्डको पाटी फेरी बन बाश हुनथाल्यो, त्यसैले म केपी ओलीतिर लागेँ, केपी ओली राष्ट्रका पिता हुन: रायमाझी
काठमाडौ। एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले ५ दलीय गठबन्धन गरेर पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्टको नाममा अराजनीतिक तथा राजनीतिक रुपमा अपराधीपूर्ण काम गरेको आरोप लगाए। उनले ओरालो लाग्दै गरेको माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष दाहाल कांग्रेसको पुच्छर भएर लागेको पनि आरोप लगाए। एमाले अर्घाखाँचीको ८ औं जिल्ला अधिवेशनलाई उदघाट्न गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीले चुनावमा सूर्य र हसिया हथौडामा भोट […]
माल भनेको के हो? आज हामी तँपाईहरुलाई बुझाउछौं माल भनेको के हो?
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on माल भनेको के हो? आज हामी तँपाईहरुलाई बुझाउछौं माल भनेको के हो?
काठमाडौ। बाटोमा हिड्दा धेरै जसो केटा साथिहरुको मुखबाट यो माल भन्ने शब्द सुनिरहेको हुन्छु। यदि केटिहरु माल हुनेभए त्यही केटिको ठाउँमा आफ्नो दिदिबहिनी अनि आफ्नो आमालाइ राखेर हेर्नुस अनि भन्नुहोस। के तपाइको दिदिबहिनी अनि आमा केटि हैनन? कोहि केटिहरुले छोटो कपडा लगाएर हिडेको देख्यो भने त्यो केटि माल रे। धेरै जसो केटाहरुले नबुझी र नसम्झि […]
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने केपी ओलीले केही गर्छन, काम गर्न सबैले साथ दिनुपर्छ
January 12, 2022 Nepali SuryaLeaveaComment on पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने केपी ओलीले केही गर्छन, काम गर्न सबैले साथ दिनुपर्छ
काठमाडौ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक महिनाभन्दा धेरै पूर्वी नेपाल र सिक्किममा बिताए। संयोग कस्तो भने, उनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रतिको विश्वास एकदमै बढिरहेको छ र बस्न पनि ओलीकै जिल्ला झापामा बस्ने गरेका छन्। त्यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति विश्वस्त हुनुपर्ने आधार र कारणबारे पूर्वराजाले धेरैलाई खुलस्त बताएका छैनन्। त्यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति विश्वस्त हुनुपर्ने आधार र कारणबारे […]